I-Guangzhou Naiwei Robot Technology Co, Ltd.
Umatshini we-KN95 wemiauto we-earloop
I-KN95 isantya esiphezulu somatshini wokuzenzela
Umatshini we-mask we-earloop
Tsala enye i-servo motor yangaphandle ye-earloop kumatshini wokuzenzela
Tsala enye i-servo motor yangaphakathi ye-earloop yomatshini ozenzekelayo
Semiauto servo motor earloop welding umatshini
Isantya esiphakamileyo semoto yemaski yomatshini wokusika umzimba
Umsebenzi wesandla umatshini we-earloop welding
I-Ultrasonic yomatshini wemaski
Iiphakheji zezemali ziyafumaneka
Tsala enye i-servo motor yangaphakathi ye-earloop mas ngokuzenzekelayo ...
Tsala enye i-servo motor yangaphandle ye-earloop mas ngokuzenzekelayo ...
I-KF94 (uhlobo lwegqabi lomsinga) umatshini wokuzenzekelayo ngumatshini ozenzekelayo ngokupheleleyo ekuveliseni iimaski ze-KF94. Isebenzisa itekhnoloji ye-ultrasonic ukubopha ilaphu ye-PP engalukwanga kunye nezinto zokucoca ulwelo, kwaye usike umzimba womaski osongiweyo ngokwezinto ezisetyenzisiweyo. Iimaski zinokufikelela kwimigangatho eyahlukeneyo. I-earloop zizinto ezilukiweyo ezingalukanga, ezenza iindlebe zalowo uzinxibileyo zihlale kamnandi kwaye zingenaxinzelelo. Umaleko wokucoca ulwelo lwesigqubuthelo unesiphumo sokucoca ulwelo, ohambelana ngokugqibeleleyo nobuso baseAsia.
Isebenzisa imveliso ehlanganisiweyo, umatshini wonke usebenza ngokuzenzekelayo, ulula kwaye uyakhawuleza, lo matshini ufuna umntu omnye ukuba asebenze.
2. Incinci ngobukhulu kwaye ayihlali ndawo ininzi. Yamkela isakhiwo sealuminium, esihle kwaye esiqinileyo.
3. Ukulawulwa kweenkqubo ze-PLC, iqondo eliphezulu lokuzenzekelayo, ukufunyanwa kweefoto zezixhobo, ukukhusela iimpazamo, ukunciphisa inkunkuma.
4.Ukuxhotyiswa ngesilawuli sokuqina komzimba, ifidi ithe tyaba kwaye ayishwabanisi, ubungakanani bemveliso ichanekile, amalunga e-solder alungile, axhotyiswe ngesilinda ye-SMC, iveluva ye-solenoid, i-titanium alloy mold, yomelele kwaye isebenza kakuhle.
5. Umgca wemveliso uphela ukrelekrele kakhulu, onokuthi ulinciphise kakhulu inani labasebenza. Inobuchwephesha obuphambili, ulwakhiwo olufanelekileyo, ukusebenza okuthembekileyo, ukusebenza ngokukuko kunye nokusebenza kwemveliso ephezulu.
Umatshini wokwenza imaski ye-earloop ngesantya esiphezulu kwaye ngokuzenzekelayo ngokuzenzekelayo. Umaleko wangaphakathi nangaphandle wemaski wenziwe kwilaphu elingalukwanga, umaleko wokucoca ophakathi welaphu elinyibilikisiweyo kunye nomqhaphu onyibilikisiwe, ibhulorho yempumlo yinto enamathelayo, ke imaski intle kakhulu.
Umatshini unokuvelisa ubungakanani beemaski ezi-2, ezifanelekileyo abantu abadala kunye nabantwana.
I-KN95 isantya esiphezulu semveliso yemaski yokusonga ngokuzenzekelayo. lo matshini ukondla wonke umqulu, kunye nokutyibilika kwamatye angalukanga amalaphu aqokelelweyo e-welding, kunye nokusika i-earloop kunye ne-welding, ii-rolls ze-earloop azenzeki ngokuzenzekelayo kwaye zisika, emva koko umzimba wemaski usongwe ngesiqingatha. Emva kwentsimbi ye-ultrasonic kunye nokudityaniswa, imaski ekugqibeleni iyasongwa kunye nefom. Iyakwazi ukufikelela kwi-stop-stop, ngokuzenzekelayo, kwimveliso ephezulu yokusebenza.
Umatshini we-KN95 we-semiauto we-earloop, owamkela i-ultrasonic ukujija i-earloop e-elastic kumacala omabini e-KN95. Mnye kuphela umqhubi ofunekayo ukugqiba yonke inkqubo ye-earloop welding.
Isantya esiphezulu sokurhuqa enye ye-servo motor yangaphakathi ye-earloop umatshini ozenzekelayo, yimodeli esebenzayo kakhulu kwaye isebenzayo. Emva kokuba umzimba wemaski wenziwe kumatshini wokusika isigqubuthelo, umatshini we-servo wangaphakathi we-earloop welding onokuthi ugcwalise ngokuzenzekelayo i-earloop welding, ikakhulu ibandakanya ibhanti yokuhambisa imaski, indlela yokutsala indlebe, isixhobo se-ultrasonic welding, indlela yokufumana imaski.
Isantya esiphezulu sokusika, ukuwelda kunye nokwenza umatshini wemaski, isebenzisa itekhnoloji ye-ultrasonic ukubopha umaleko we-3 ukuya ku-5 welaphu le-nonwoven, ulayishe ibhulorho yempumlo, kwaye usike umzimba wemaski yokuphuma.
Tsala enye i-servo motor yangaphandle ye-earloop ngokuzenzekelayo kumatshini wokwenza imaski
Isantya esiphezulu sokurhuqa imoto enye ye-earloop mask umatshini osebenza kakuhle kwaye usebenza ngokukuko, uqhagamshelwe ngumgca wokuhambisa, kubandakanya umatshini wokwenza imaski kunye nomatshini we-servo wangaphandle we-earloop
Iiparamitha zobugcisa I-Voltage 220V 50Hz Amandla 17kw Uxinzelelo lomoya 6kg / ㎝² Isiphumo se-Ultrasonic 20KHz Iziphumo ≧ 80pcs / min Ulwakhiwo lwezixhobo ezirhabaxa zomatshini wokusika iMask, i-Earloop yokutsala umgca, Indlela ye-Ultrasonic ye-welding maching Detelectric detection control indlela ye-PLC Ubungakanani bomatshini 4500 * 2400 * 2010mm Ubunzima be-1000kg Ubungakanani beMaski 175x95mm Ingqwalaselo ayivumelekanga ukubamba i-transducer ye-ultrasonic enevolthi ephezulu. Ukuprintwa ...
Inkqubo yentshukumo ye-ultrasonic inokubonelela ngamandla ombane oshukumayo wokuhambisa iwelding yeplastiki okanye amalaphu efayibha yemichiza. Le nkqubo ifuna ukuba ixhotyiswe ngolawulo lwentshukumo (indawo, uxinzelelo) kunye nezinye izixhobo zoomatshini ukugqiba umsebenzi we-welding.
Umsebenzi wesandla umatshini we-earloop welding, ngamanqaku amabini umatshini wokuwelda, ulula, kulula, ixabiso eliphantsi, ufuna kuphela umqhubi omnye.
I-Semiauto umatshini we-earloop welding, odityaniswe ngumgca wokuhambisa, isixhobo sokutsala i-earloop, isixhobo se-ultrasonic welding, isixhobo sokufumana imaski. Emva kokuba umzimba wemaski wenziwe kwimaski yokusika umatshini, emva koko umzimba wemaski ufakwa kwibhanti yomatshini we-earloop welding, inokugqibezela i-earloop ye-welding. Umxholo woyilo wale semiauto umatshini we-earloop welding: ulula kwaye kulula ukuyisebenzisa, i-welding ezenzekelayo, izinzile kwaye ithembekile, isebenza kakuhle, ukuhambelana kunye nokusebenza kweendleko.
Lwedilesi: No.39, Kechuang Road, Private Science & Technology Park, Taihe Town, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong, China
© Copyright 2020: Onke amalungelo agciniwe.